Achawlaymyar - Page 456 of 489 - News and Media
ဒီအိမ်မက်တွေ မက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီ ထိုးပါ…။
June 28, 2020 by Achawlaymyar
Zawgyi ဒီအိမ်မက်တွေ မက်ခဲ့ရင် မဖြစ်မနေ ထီ ထိုးပါ … ထီ ပေါက်မယ့် အိမ်မက် (၁) အိမ်မက်မြင်မက်ရာတွင် ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ကြီးဖြစ်စေ ကြွရောက်လာပြီးလျှင် သင်အလိုရှိသော ဆန္ဒပြည့်ဝစေပါမည်။တရားကိုသာ အားထုတ်ပါဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊သို့မဟုတ် မည်သည့်ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်၍မည်သို့ပြုလုပ်ပါဟု မှာကြားခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊အိမ်မက်တွင် မြင်မက်ရပါက နတ်ကြီး၊ဝိဇ္ဇာကြီးများနှင့်တွေ့ရသော အိမ်မက်သည်။ ထီပေါက်မည့် အိမ်မက်ဖြစ်သည် …။ (၂) ရွံဖွယ်အတိဖြစ်သော မစင်များကို ပိုးလောက်တို့နှင့်တကွ မြိန်ရှက်စွာ သုံးဆောင်ရသည်ဟု မြင်မက်သည်ဖြစ်စေ မိမိကိုယ်၌ မစင်လိမ်းကျံရခြင်း၊မစင်တွင်းကြီးထဲ သို့ကျရောက်ရခြင်း လူတဦးတစ်ယောက်က မစင်များကို ထုတ်ပေးသည်ဟု မြင်မက်ရခြင်း၊ ပိုးလောက်တို့သည် မိမိကိုယ်၌ အထပ်ထပ် ကပ်ရောက်သည်ဟု မြင်မက်ခြင်းတို့သည် ထီပေါက်တတ်သော အိမ်မက်များဟု ဆိုလိုသည် …။ (၃) ဝတ်ဖြူစင်ကြယ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် … Read more
မိတ်ဆွေခုနှစ်ရက် သားသမီးများ အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ တစ်လစာ ဟောစာတမ်း။
Zaw Gyi တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဤလအတွင်း၌ သင်သည် မြေကိစ္စ အမွေနှစ်ကိစ္စများကြုံရတတ်သည်။ ငွေရှာရ လွယ်ကူပေမယ့် စုဆောင်း၍ မရ၊။ ငွေဝင်လျှင် ကိုင်မထားရ၊ ရွှေဝယ်ထားပါ။ ဘုရားဆင်းတုတော်၊ ပုံတော်များ ကြွလာမည်။ သင့်အတွက် အလွန်ကောင်းသောနိမိတ် ဖြစ်ပါသည် နာရေးကိစ္စကို အကြောင်းပြ၍ ခရီးသွားရတတ်သည်။ ဆရာသမားကဲသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်မည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်လက်များ မိတ်ဆွေများနှင့် အဆင်မပြေ လမ်းခွဲ ရတတ်သည်။ အထူးသတိပြုရန် အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် အဆင်မပြေ ကြီးစွာဖြစ်တတ်သည်။ သွပ်၊ သံ၊ သစ်တစ်ပတ်ရစ် ပစ္စည်းလက်မခံပါနှင့်၊ အောက်လက်ငယ်သား ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ အလှူအတန်းပြုရခြင်း၊ မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။ အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်သည်။ ရွှေဝင်မည်။ ရတနာပစ္စည်းများ ၀င်မည်။ အဘက်ဘက်မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာများ … Read more
ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပုံတွေ ကို လိုက်မန့်ပီးတို က်ခိုက်နေ တဲ့ အကောင့်ပိုင် ရှင်တွေ ကို ဒေါက် တာမြဝတ်ရည် ဒဲ့ရှင်းပြီ(ရုပ်သံ)
အရင်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပုံတွေ ကို လိုက်မန့်ပီးတို က်ခိုက်နေ တဲ့ အကောင့်ပိုင် ရှင်တွေ ကို ဒေါက် တာမြဝတ်ရည် ဒဲ့ရှင်းပြီ(ရုပ်သံ) ထ က်မြက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလေ့ရှိတဲ့ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေသိကြမှာပါ။ ဒေါက်မြဝတ်ရည်ကတော့ လက်ထပ်ပွဲအတွက် (၆) လလောက်အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပေမဲ့ ကပ်ရောဂါကြီးနဲ့တည့်တည့်တိုးပြီးတော့ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုသာ ခမ်းခမ်းနားနားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်တို့စုံတွဲကတော့ မေလ(၂၇)ရက်နေ့မှာ တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာတို့လင်မယားရဲ့ page နဲ့အကောင့်တွေအောက်မှာ အရင်ကရည်းစားဟောင်းပုံနဲ့တွဲရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကို အကောင့်တုတွေနဲ့လိုက်မန့်နေကြတာပါ လင်မယားကြားစိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိယုတ်မာနေကြတာပါ။ လူတိုင်းမှာ ရည်းစားဟောင်းရှိကြစမြဲပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲကွာသွားကြပြီး အိမ်ထောင်ကိုယ်စီကျနေတဲ့အချိန်မှာ အတိတ်အကြောင်းတွေကိုပြန်လှန်တာဟာ အောက်တမ်းကျတဲ့လုပ်ရပ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် က လူတချို့ရဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ဓာတ် ဘယ်တုန်းက မှန်း မသိ လူတယောက်ကို မနာလို အပြစ်ရှာ ချင်တာ နဲ့ ရှိတဲ့ ပုံကို ကောက်တင်လိုက်ကြ … Read more
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်က ပြုတ်ကျ သေဆုံးသွားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးရဲ့ ဖခင်ပြောပြလာတဲ့(ရုပ်သံ)
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်က ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးရဲ့ ဖခင်ပြောပြလာတဲ့ (ရုပ်သံ) ကို ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် …။ Vedio အောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်ပါတယ် …။ ယုံလဲမယုံဖူးဘယ်လိုမှလဲ ဖြေသိမ့်လို့မရဖူးမကြီးရေ အမှတ်တရ memory လေးပြန်တတ်လာအောင်လို့ပါ။ မကြီးရေ အမှတ်တရ…memory လေးပြန်တတ်လာအောင်လို့ပါ။ အရမ်းလဲလွမ်းနေတယ် …။ ဘယ်လိုမှ ဖြေသိမ့်လို့မရဖူး။ယုံလဲမယုံဖူး။ ညီမလေးနဲ့ တူတူနေမယ်ဆို စားချင်တာလဲ ချက်ကျွေးမယ်ဆို မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေလဲ လိုက်ပို့ ပေးမယ်ဆို …။ မရီး အမေကို ဂရုစိုက်ပေးဆို နောက်လဲ ဘယ်သွားသွား တူတူသွားကြမယ်ဆို အခုတော့ ဘာဖြစ်လို့ထားသွားတာလဲ။အဲ့လိုမှန်းသိရင် ညီမလေး လည်း လိုက်ခဲ့ ပါတယ် …။ အခုတော့ မကြီး အဆင်ပြေအောင်နေနော်။ညီမလေးတို့အတွက်ဘာမှမပူနဲ့ မကြီးအတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ များများလုပ်ပေးမယ်နော် …။ ။ အေးချမ်းစွာ….အနားယူပါနော်…မရီး 27.6.2020 … Read more
မဇာခြည်မြင့်မြတ်၏ နောက်ဆုံးဆေးရုံစစ်ဆေးချက်အဖြေအရ အဆိုပါမိန်းကလေးသည် ဦးဏှောက်အနောက်ဘက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း…. ခြေကျိုးခြင်း နှင့် တောင်ပေါ်မှပြုတ်ကျသည့်အရှိန်ကြောင့် အတွင်းဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ရရှိထားမှုကြောင့်သာဆုံးပါးသွားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိန်းကလေး၏ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားသို့ စစ်ဆေးပြုလုပ်ချက်အရ အခြားသော/မသမာသော ထိခိုက်မှုမျိုးတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ။ မဇာခြည်မြင့်မြတ်သေဆုံးရခြင်းသည် သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြုလုပ်သွားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။(အခြားသောထင်မြင်ယူဆ/စွပ်စွဲချက်များတစ်ခုမှမဟုတ်ပါ)။ ယခု case အား ဒီpost မှာသာအဆုံးသတ်ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ #ညီမလေးဘဝဆက်တိုင်းငြိမ်းအေးပါစေ🙏 #မိသားစုနှင့်ထပ်တူဝမ်းနည်းစွာဖြင့် …..ဆရာလုံး🙏 ————————- မဇာခွညျမွငျ့မွတျ၏ နောကျဆုံးဆေးရုံစဈဆေးခကျြအဖွအေရ အဆိုပါမိနျးကလေးသညျ ဦးဏှောကျအနောကျဘကျထိခိုကျဒဏျရာရရှိခွငျး…. ခွကြေိုးခွငျး နှငျ့ တောငျပျေါမှပွုတျကသြညျ့အရှိနျကွောငျ့ အတှငျးဒဏျရာအကွီးအကယျြရရှိထားမှုကွောငျ့သာဆုံးပါးသှားရခွငျးဖွဈပါသညျ။ မိနျးကလေး၏ခန်ဓာကိုယျအနှံ့အပွားသို့ စဈဆေးပွုလုပျခကျြအရ အခွားသော/မသမာသော ထိခိုကျမှုမြိုးတဈစုံတဈရာမရှိပါ။ မဇာခွညျမွငျ့မွတျသဆေုံးရခွငျးသညျ သူ၏ဆုံးဖွတျခကျြအရ ပွုလုပျသှားခွငျးသာဖွဈပါသညျ။(အခွားသောထငျမွငျယူဆ/စှပျစှဲခကျြမြားတဈခုမှမဟုတျပါ)။ ယခု case အား ဒီpost မှာသာအဆုံးသတျရေးသားဖျောပွပေးလိုကျပါသညျ။ #ညီမလေးဘဝဆကျတိုငျးငွိမျးအေးပါစေ🙏 #မိသားစုနှငျ့ထပျတူဝမျးနညျးစှာဖွငျ့ …..ဆရာလုံး
“သင့်ရဲ့ ချက်ပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ”
လူ တွေ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် မ တူ ညီ ကြ သ လို ပဲ ချက် ပုံ စံ တွေ လည်း အ မျိုး မျိုး ကွဲ ပြား ကြ ပါ တယ်။ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် အ စိတ် အ ပိုင်း တွေ က နေ တ ဆင့် သူ့ ရဲ့ ပု ဂ္ဂိုလ် ရေး ဆိုင် ရာ အ ချက် အ လက်တွေ ကို သိ … Read more
အမျိုးသမီးများတွင်ရှိသော ထင်ရှားသောမှဲ့(၇)မျိုး ရတနာဆံကျစ်လို့ခေါ်တဲ့မှဲ့ရယ်… ရတနာဆီမီးထွန်းဆိုတဲ့မှဲ့ရယ်မျက်ရည်ခံမှဲ့ရယ်…. ဘယ်ဘက်မျက်ရည်ခံမှဲ့(ညာရယ်)နှုတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့မှဲ့ရယ်…. ရွှေပိတုန်းစုပ်ဆိုတဲ့မှဲ့ရယ်စံပယ်တင်(ညာဘက်)မှဲ့ရယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတွေအတွက်အထင်ကရမှဲ့(၇)မျိုးရှိတယ်….။ အဲဒီမှာရင်ဘတ်အလယ်မှာထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကို၇တနာရွှေအိုးလို့ခေါ်တယ်…. အဲဒီမှဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ များသောအားဖြင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာလေ့ရှိတယ်….နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားတတ်တယ်…. နောက်ပြီးသူတို့တွေဟာအလုပ်ဌာနတွေမှာအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်….သူတို့တွေဟာဆင်းရဲရင်လဲ ခနပဲဆင်းရဲတွင်းတဲကျနေရင်လည်းခနပဲ …. မုချကြီးပွားချမ်းသာမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်….အဲဒီလို၇တနာရွှေအိုးမှဲ့ပါနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျော်နီပတ္တမြားစိန်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုခုကိုလက်သူကြွယ်မှာ ၀တ်ဆင်ထားရင်ထူးထူးခြားခြားကံမြင့်မားမယ်… နောက်တစ်ခုက နဖူးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကိုကျတော့ ရတနာဆီမီးထွန်းလို့ခေါ်တယ်…. အဲဒီလိုမှဲ့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာကြတယ်….အိမ်ထောင်ဘက်ကောင်းနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်ကြတယ်…. နောက်ပြီး သားကောင်းသမီးကောင်တွေထွန်းကားကြတယ်….ပြောရရင်တော့ မိဘထက်မြတ်တဲ့သားသမီးတွေ နောက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့သားသမီးရတနာတွေကို ဖွားမြင်နိုင်ကြတယ်…. ဘာသာရေးဆိုရင်လည်း အရမ်းစိတ်ဝင်စားလေ့ရှိတယ်….တစိုက်မတ်မတ်လုပ်လေ့ရှိတယ်….ဒီဘ၀တွင် ဘာသာတရားလိုက်စားမယ်ဆိုရင် တရားထူးတရားမြတ်တောင်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်…. နောက်တစ်မျိုးက ဘယ်ဘက်မျက်ခန်းနဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းကြား ထင်ထင်ရှားရှားမှဲ့တစ်လုံးတည်း ထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကိုမျက်ရည်ခံမှဲ့လို့ခေါ်တယ်…. ဘယ်လောက်ပဲ ငွေကြေးတွေစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေပေမယ့် စိတ်ဆင်းရဲရတတ်တယ်….သောကများမယ်….ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ကတည်းက ကြန်းတမ်းတဲ့ဘ၀ခရီးကို အကွေ့အကောက်များစွာနဲ့ဖြတ်သန်းရတတ်တယ်….. နောက်ပြီး အိမ်ထောင်ဆက်လဲများတတ်တယ်….သူတို့တွေဟာ အနက်ရောင်ဆိုရင်လုံးဝမ၀တ်သင့်ဘူး ရှောင်သင့်တယ်…..ကျောက်စိမ်းကိုလည်းမ၀တ်သင့်ဘူး….စ်ိန်ဥဿဖယာပုလဲစတဲ့ ရတနာတစ်ခုခုကို ကိုယ်နဲ့မကွာဝတ်ထားသင့်တယ်…. နောက်မှဲ့တစ်မျိုးကိုကြတော့ ညာဘက်အောက်မျက်ခမ်းနဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းကြားမှာ ထင်ထင်ရှားရှား မှဲ့တစ်လုံးတည်းထင်းထင်းကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင် မျက်ရည်ခံကြီးလို့ခေါ်တယ်….. သူတို့ရဲ့ဘ၀တစ်လျှောက်ဆုံးရှုံးမှု့ကြီးများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပြီး အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာ … Read more
ညီမလေးဇာခြည်မြင့်မြတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး….(ရုပ်သံ) အေးချမ်းသောဘုံဘဝမာ ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါညီမလေး…. မဇာခြည်မြင့်မြတ် ၏နောက်ဆုံးခရီးသို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး မကြာမီ ရရှိလာမည့်ဆေးစစ်ချက်အဖြေများကို လိုရင်းတိုရှင်း ပိုစ့်တစ်ခုတင်ပြီးလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ရပ်များအကြောင်းရေးသားဖော်ပြမှုများအားအဆုံးသတ်ပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ နောက်ဆုံးခရီးကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့သွားရအောင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအားထိခိုက်စေနိုင်သောအပုံများနှင့် ဓါတ်ပုံ-Vedio များ တင်ခြင်း /share ခြင်း များမလုပ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ credit sa yar lone unicode ညီမလေးဇာခြည်မြင့်မြတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး….(ရုပ်သံ) အေးချမ်းသောဘုံဘဝမာ ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူပါညီမလေး…. မဇာခြည်မြင့်မြတ် ၏နောက်ဆုံးခရီးသို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး မကြာမီ ရရှိလာမည့်ဆေးစစ်ချက်အဖြေများကို လိုရင်းတိုရှင်း ပိုစ့်တစ်ခုတင်ပြီးလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ရပ်များအကြောင်းရေးသားဖော်ပြမှုများအားအဆုံးသတ်ပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ နောက်ဆုံးခရီးကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့သွားရအောင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအားထိခိုက်စေနိုင်သောအပုံများနှင့် ဓါတ်ပုံ-Vedio များ တင်ခြင်း /share ခြင်း များမလုပ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ရုပ်သံကို … Read more
ပြုံးလိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်း အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတတ်ကြတဲ့ အင်္ဂါ သားသမီးလေးတွေ အကြောင်း။
ပြုံးလိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်း အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတတ်ကြတဲ့ အင်္ဂါ သားသမီးတွေ အကြောင်း… အင်္ဂါတွေဟာ အပြင်ပန်းသဏ္ဍန် တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနဲ့ နေတတ်ကြပေမဲ့အင်မတန်မှ ဒေါသကြီးတဲ့ နေ့နာမ်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ မဟုတ်ရင် မခံချင်ကြဘူး။ ဒေါသဖြစ်ရင် အပြင်မှာပေါက်ကွဲကြတာထက် ပါးစပ်က ပူညံပူညံနဲ့ ရေရွတ်နေ တတ်ကြတယ်။ လူတွေအပေါ် ဖော်ရွေစွာနဲ့ ခင်မင်တတ်ပါတယ်။ ဝတ္တရားပျက်ကွက်မိရင်လည်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန် တွေးပူနေတတ်ကြတယ် …။ မိသားစုတွေအပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးချင်တဲ့စိတ်တွေ ရှိကြတယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ ပုံစံမျိုးပေမဲ့ တခါတလေ မိသားစုထဲမှာ ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်တတ်ကြတယ် အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ သူများအပေါ် ဦးဆောင်လိုတဲ့စိတ် ရှိတယ်။ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ်အကောင်းလို့ ထင်မြင်တတ်ကြတာ အင်္ဂါပါ …။ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားတတ်ကြတယ်။ အင်္ဂါတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်။ တခါတရံ ကိုယ့်ကိုယ်ပင် ချီးမွမ်းတတ်တယ်သူများတွေမြှောက်ပေးရင်တော့သိပ်မကြိုက်ဘူး။ အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အေးအေးဆေးဆေး … Read more
← Previous Page1 … Page455 Page456 Page457 … Page489 Next →